Headline Archives - Page 13 of 25 - Bandhiga Media
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in ay furto Wadooyinka ku yaalla Gudaha Caasimadda ee xiran.
Wasiir Islow ayaa sheegay in Shacabka caasimadda dhibaatooyin…
Wasaaradda waxa ay qofka cudurka qaba ku tilmaantay ajnabi hasayeeshee ma aysan shaacin dalka uu…
Saraakiisha dowlada iyo kooxda fallaagada ayaa labaduba iska…
Waxa uu sheegay Wasiirka Amniga…
Qodobokale duwan baa idiin kugu heynaa waana maalinnimo jimco ah oo…
DHAGEYSO: Wasiir Bayle oo bogaadiyay Hadalkii Kasoobaxay Bankiga aduunka iyo hay’adda lacagta aduunka ee IMF
Wasiirka maaliyadda XFS Abdirahman Dualeh Beileh ayaa bogaadiyay hadalkii shalay ka soo yeeray Bankiga aduunka iyo hay’adda lacagta aduunka ee IMF ta ee ku aadanaa in Soomaaliya ay mudantahay in laga cafiyo deymaha faraha badan ee…
Wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada Soomaaliya Xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa, ayaa Magaalada Kampala ee Dalka Yugaandha kaga qeyb galay shir looga hadlayay xuquuqda shaqaalaha iyo daryeelka Bulshada.
Shirkan oo ahaa kulankii 46-aad…
Kulamo ay guddiyada sare ee Baniga adduunka iyo IMF yeesheen 12-13-kii bishaan ayey uga doodeen dekumenti ay shaqaalaha bangiga adduunka iyo IMF ka diyaariyeen Soomaaliya, oo khuseeya hindisaha sare ee dalalka saboolka ah ee aad …
Subax wanaagsan Sabti wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada warka Subax Radio Bandhiga ee magaalada Muqdisho.
Qodobo kale duwan ayaa idiin heynaa saaxiibayaal waa jimco ay taariikhda ku beegan tahay 14-02-2020-ka.…
Habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda Bandhiga ee magaalada Muqdisho.
Qodobo kale duwan ayaa idiin heynaa, 13-2-2020-ka waana habeenimo khamiis ah.
HALKAAN HOOSE KA DHAGEYSO WARKII OO DHAN:�…
Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta Xfs ayaa heshiis la saxiixatay Midowga Boostada Adduunka (UPU)
Madaxweyne Farmaajo oo raali gelin ka bixiyey dhibaatadii loo geystay gobolada Woqooyi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo xiray Shirka Sanadlaha ah ee Garsoorka dalka ayaa si faahfaahsan u soo bandhigay xiriirka dhow ee ka dhaxeeya cadaaladda, horumarka,…